Sina ROV2.0 mpamokatra sy mpamatsy robot an-drano | Topsky
Ny robots anaty rano, antsoina koa hoe submersibles tsy voafehin'ny olona lavitra, dia karazana robot miasa mahery vaika miasa anaty rano. Masiaka sy mampidi-doza ny tontolo anaty rano, ary voafetra ny halalin'ny fisitrika ataon'olombelona, ​​noho izany dia lasa fitaovana lehibe hampivelarana ny ranomasina ny robot anaty rano.
Misy karazany roa indrindra ny submersibles tsy voafehy voafehy lavitra: taribin-tsambo voafehy voafehy lavitra sy submersibles voafehy voafintin'i cableless. Anisan'ireny, ny submersibles voafehy lavitra any anaty kambana dia mizara telo karazana: mandehandeha any anaty rano, misintona ary mandady amin'ny tranon'ny sambo. .
Fanalahidy iray hametrahana halalina
100 metatra ny halaliny
Hafainganana ambony indrindra (2m / s)
Fakan-tsary 4K Ultra HD
2 ora fiainana bateria
Kitapo kitapo tokana
Size: 385.226 * 138mm
Mamerina & mihodina
Ny lanjan'ireo miverina & mihodina (tsy misy tariby): in-300
Halavirana WIFI tsy misy tariby: <10m
Ny halavan'ny tariby: 50m (fanaingoana mahazatra, ny ambony indrindra dia afaka manohana 200 metatra)
Fanoherana mahery vaika: 100KG (980N)
Miasa matetika: 2.4GHZ (Bluetooth)
Ny mari-pana miasa: -10 ° C-45 C
Halavirana tsy misy tariby (fitaovana marani-tsaina sy fanaraha-maso lavitra): <10m
CMOS: 1 / 2.3 santimetatra
Halavan'ny fifantohana: 70mm ka hatramin'ny tsy manam-petra
Faritra ISO: 100-3200
Famahana ny horonan-tsary
Horonantsary faran'izay betsaka: 60M
Fahaiza-manao karatra Memory 64 G
Jiro fenoy LED
Famirapiratana: 2X1200 lumens
Mari-pana loko: 4 000K- 5000K
Hery lehibe: 10W
Boky fanalefahana: azo ovaina
IMU: gyroscope / accelerometer / kompas (axis) telo-axis
Temperature sensor: +/- 2 ° C
Fotoana famenoana sambo sambo: 1,5 ora
Fotoana famerenana miverimberina: 1ora
Fikarohana sy famonjena famonjena azo antoka
Azo ampiasaina hanamarinana raha apetraka amin'ny tohodrano sy ny sisin-tetezana ny baomba ary tsara na ratsy ny firafitra
Fanaraha-maso lavitra, fanaraha-maso akaiky ny entana mampidi-doza
Ny filaharana anaty rano dia manampy amin'ny fametrahana / fanesorana
Famantarana ireo entana an-tsokosoko eo amin'ny sisiny sy amin'ny farany ambanin'ny sambo (Filaminam-bahoaka, fadin-tseranana)
Fijerena ireo tanjona kendrena anaty rano, fikarohana sy famonjena ireo rava sy ireo vanja milevina, sns.
Mikaroha porofo anaty rano (Filaminam-bahoaka, fadin-tseranana)
Famonjen-dranomasina sy famonjena, fikarohana an-dranomasina; 
Tamin'ny 2011, ilay robot anaty rano dia afaka nandeha tamin'ny hafainganam-pandeha 3 ka hatramin'ny 6 kilometatra isan'ora tamin'ny halalin'ny 6000 metatra lalina indrindra amin'ny tontolo anaty rano. Ilay radara mijery lavitra sy mijery ambany dia nanome azy “fahitana tsara”, sy ny fakantsary, fakan-tsary ary ny rafitra fitetezana mazava tsara izay nitondrany azy. , Avelao izy ho "tsy hay hadinoina". Tamin'ny 2011, ilay robot anaty rano nomen'ny Woods Hole Oceanographic Institute dia nahita ny faharavan'ny sidina Air France tamina velaran-dranomasina 4000 kilometatra toradroa tao anatin'ny andro vitsivitsy monja. Talohan'izay dia sambo sy fiaramanidina isan-karazany no nitady nandritra ny roa taona fa tsy nisy vokany.
Ny fiaramanidina mpandeha MH370 tsy hita dia tsy hita hatramin'ny 7 aprily 2014. Nanao ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Ivon-toerana Koordinasiôna mitambatra ho an'ny fiarovana an-dranomasina Australiana. Ao anaty toe-javatra marefo ny hetsika fikarohana sy famonjena. Ilaina ny mitady hatrany ny toerana ary tsy hahafoana fanantenana. Ny faritra fikarohana lalina dia hahatratra 5000 metatra. Mampiasà robots anaty rano hikarohana signal black box. 
Fanaraha-maso ny fantsona
Azo ampiasaina hanaraha-maso ireo fiara mifono rano, fantson-drano ary fitahirizana anaty rafitra fisotro rano ao an-tanàna
Fantsom-panafody / fantsakana, fanaraha-maso ny tatatra
Fanaraha-maso ny fantsom-pitrandrahana solika avy any ivelany;
Fijerena ny fantsona renirano sy renirano 
Sambo, renirano, diloilo ivelany
Famerenan-tanana; vatofantsika anaty rano, mpandoto, fikarohana any ambany
Fanaraha-maso ireo faritra any anaty rano any amin'ny wharves sy ny fototr'ireo antontam-bato, tetezana ary tohodrano;
Fahazoana sakana amin'ny fantsona, asan'ny seranana
Fanarenana ny firafitry ny rano anaty lohan'ny fandavahana, ny injenieran'ny solika any ivelany;
Fikarohana sy fampianarana azo aforeto
Fandinihana, fikarohana ary fampianarana ny tontolon'ny rano sy ny zavaboary anaty rano
Fijerena ambanin'ny ranomandry
Fialamboly anaty rano
Fandefasana fahitalavitra anaty rano, sary anaty rano
Diving, sambo, lakana;
Fikolokoloana ireo mpitsangatsangana, fifantina toerana mety alohan'ny antsitrika
Indostria angovo mihodina
Fanaraha-maso reaktoran'ny angovo nokleary, fisafoana ny fantsom-panafody, fitiliana ny vatana ivelany ary fanesorana
Fanarenana ny hidin-tsambo amin'ny tobin-pamokarana herinaratra;
Fikojakojana tohodrano sy toho-drano (fidirana fasika, fitoeram-pako, ary fantson-drano)
Arkeolojia ambanin'ny rano, fanadihadiana amin'ny vaky sambo anaty rano
Fambolena jono anaty rano lalina, fanadihadiana momba ny haran-dranomasina artifisialy
Teo aloha: Detector YQ7 Multi-gazy
Manaraka: Robot fanaraha-maso lavitra an'ny ROV-48 mpamonjy rano
2-S RXR-MC80BD famonoana afo-porofona sy ...
YHZ9 metatra hovitrovitra nomerika
X8 Akaiky ny fandavahana mangina
LT-QXWB16 Electric kitapom-batsy karazana rano madio mis ...